Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: देश बचाउन पशुपति नाथलाई गुहार्ने बेला आएको छ : सूर्यबहादुर थापा, 'यो सरकारले भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरेको छ।' : पशुपति सम्शेर राणा
देश बचाउन पशुपति नाथलाई गुहार्ने बेला आएको छ : सूर्यबहादुर थापा, 'यो सरकारले भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरेको छ।' : पशुपति सम्शेर राणा
एकता अभियानमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका शीर्ष नेताले बैशाखमा हुने महाधिवेशनपबाट दुबै दल एक बनेर राष्ट्रवादी शक्तिको रुपमा उदय हुने घोषणा गरेका हुन्। एउटै मोटर चढेर आएका उनीहरुले एकै मञ्चमा उभिएर राष्ट्रिय संकटले आफूहरुलाई पुनः एकै ठाउँमा ल्याइपुर्‍याएको बताए। राप्रपा-राजपा जिल्ला एकता अधिबेशनलाई आइतबार सदरमुकाम चौतारामा संयूक्त रुपमा उद्घाटन गर्दै उनीहरुले 'राष्ट्रियता खतरामा पार्ने' ठूला तीन दलको विकल्प बन्ने अभियान थालनीको रुपमा एकतालाई औंल्याए। पार्टी फलाम झैं एक ढिक्का भएर जाने र बीचमा टुटफुट हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनीहरुले भने, 'अब मिलेर सामन्तबाद मास्ने कुरा गर्ने नवसामन्दबादलाई परास्त गर्नुछ।' ठूला तीन दल र खासगरी माओवादीप्रति बढी आक्रमक ढंगले प्रस्तुत भएका नेताहरुले उनीहरुको विकल्प खोज्ने बेला आएको धारणा राखे। राप्रपा अध्यक्ष पशुपति
सम्शेर राणाले धारिलो संगठन बनाउन पार्टी एकता भएको बताए। उनले तीन ठूला दलको कमजोरीका कारण राष्ट्रियताको जग हल्लिन थालेको आरोप लगाए। 'शान्ति र संविधान अझै द्धिविधामा रहनुमा उनीहरु नै दोषी छन्,' उनले भने। माओवादी शान्ति र संविधानमा इमान्दार छ कि छैन अहिलेसम्म थाहा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उसले मुलुकमा नाटक प्रदर्शन गरिरहेको बताए। 'सात बुँदेमा युद्धमा कब्जा सम्पति फिर्ता गर्ने निर्णय गर्ने तर क्याविनेटबाट उल्टाउने। अब माओवादी शान्ति र संविधानमा कहाँनिर प्रतिवद्ध छ?' उनले प्रश्न गरे। वर्तमान सरकारलाई 'भेडी गोठ'को संज्ञा दिंदै उनले यो सरकारले नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचारको रेकर्ड तोडेको ठोकुवा गरे। 'यो सरकारले भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरेको छ।' तीन दलले मुलुक चलाउन नसकेको दाबी गर्दै अध्यक्ष राणाले उनीहरुको विकल्प खोज्न अरु दललाई आग्रह गरे। 'साना दल मिलेर विकल्प बन्नु जरुरी छ,' उनको भनाइ छ। आत्मनिर्णयको नाममा जातीय प्रान्त बनाएर मुलकु टुक्राउन खोजेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए, 'मुलुक विखण्डनको खतराको घण्टी बजाइएको छ।'
राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले संकटमा परेको राष्ट्रिय अस्मिताको संरक्षण गर्न बचनमा मात्र नभएर दुबै दल कर्ममा पनि संगठित हुने दाबी गरे। देश बचाउन पशुपति नाथलाई गुहार्ने बेला आएको भन्दै उनले यो बाहेक अर्को कुनै त्यस्तो पक्ष अब बाँकी नरहेको बताए। राजनीतिक दलमा अब पनि चेतना नआए मुलुक दुर्घटनामा पर्ने जनाउँदै थापाले भने, 'पशुपतिनाथले सबैलाई सद्वुद्धि दिऊन्।' शान्ति र संविधानमा ठूला दल गम्भिर नहुँदा मुलकु अर्णिनित अवस्थामा पुगेको जनाउँदै उनले हरेक दलमा सरकारमा पुगेर पैसा थुपार्ने प्रवृत्तिको विकास भएको बताए। माओवादीतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, 'चन्दा उठाएर काम गर्नुपर्ने मुलुकका पार्टी एशियाकै धनी दल बनेका छन्।' राजपाका सहअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार 'हाटहुट लाटलुट प्राइभेट कम्पनी' बनेको व्यंग गरे। देशमा लुटतन्त्र मच्चिरहेको बताउँदै उनले भने, 'कानुनी राज्य छैन। लुटतन्त्रको राज छ। अपराधी प्रहरीका हाकिमसँगै हिँड्छन्।'
सामन्तबाद हराउने नाममा माओवादीले नवसामन्तबाद लादेको र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरेको आरोप उनले लगाए। माओवादी आपसी झगडामा मुलकु बन्धक बनेको चर्चा गर्दै लोहनीले सातै दिनमा संविधान बन्न सम्भव रहेको बताए।
राष्ट्रिय शक्ति प्रजातन्त्र पार्टीको नाममा राप्रपा-राजपा एकता अधिवेशन भइरहेको छ। राप्रपा केन्द्रीय सदस्य बुद्धिमान तामाङले सिन्धुपाल्चोक बाहेक ६ जिल्लामा एकता अधिवेशन भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार आगामी बैशाखमा दुबै पार्टीको एकता अधिवेशन हुनेछ। जिल्ला एकता अधिवेशनले आगामी कार्यकालको लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ।